काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा दुनियाँलाई थ्रेट दिने गरि दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। उसले काठमाडौंमा भेट, दुनियाँलाई थ्रेट शीर्षकमा खबर लेखेको छ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसँगको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ‘चीनको कुनै पनि हिस्सालाई टुक्र्याउने कोसिस गर्ने जो–कोहीलाई पनि धुलोपिठो बनाइनेछ । त्यस्तो प्रयास गर्न उक्साउने कुनै पनि बाह्य शक्तिको दिवा सपनालाई चिनियाँ जनताले चकनाचुर पार्नेछन् ।’ भनेर चेतावनी दिएका थिए । जसलाई विश्वभरका ठूला सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित, प्रशारित गरेका थिए ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले मान गुमाउँदै माननीयहरु शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । उसले नेपाल भारत सीमापार प्रसारण लाइनमा भएको सहमतिलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।
कान्तिपुर दैनिकले नेपाल भारत उर्जा बैठक: प्रसारण लाइन बराबरी लगानीमा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । प्रदेश मातहत रहेका डिभिजन वन अधिकृतहरुलाई संघ मातहत नै ल्याइएको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
नागरिक दैनिकले महरा र आलम हिरासतमै शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने प्रत्येक वर्ष अपराध बढ्दै गएको विषयलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ।
यस्तै आजका पत्रपत्रिका नेपाली क्रिकेटका सफल कप्तान पारस खड्काले कप्तानीबाट राजीनामा गरेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । उनले मंगलबार पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको वार्तामा व्यक्त गरेको विचार संसारभर छरिएको छ ।
भ्रमणको दोस्रो दिन आइतबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो । तिब्बत, ताइवान, हङकङ र सिनज्यान विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चासोबारे सीले ओलीसँग चर्चा गरेका थिए । तर, त्यस्तो चासो चीनका लागि असह्य हुने उनको भनाइ थियो ।
ओलीसँग भेटमा सीको भनाइ थियो, ‘चीनको कुनै पनि हिस्सालाई टुक्र्याउने कोसिस गर्ने जो–कोहीलाई पनि धुलोपिठो बनाइनेछ । त्यस्तो प्रयास गर्न उक्साउने कुनै पनि बाह्य शक्तिको दिवा सपनालाई चिनियाँ जनताले चकनाचुर पार्नेछन् ।’
यो चेतावनी सीले ओलीलाई होइन, दुनियाँलाई सुनाउन खोजेका थिए । त्यसैले ओलीसँग सीले व्यक्त गरेको विचार भन्दै यो भनाइ पहिलोपटक चीनको सरकारी टेलिभिजन चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क (सिजिटिएन)ले सार्वजनिक गरेको थियो ।
लगत्तै, यो समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको मुख्य हेडलाइन बनेको छ । यसबारेमा समाचार प्रकाशित गर्ने सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले मुख्यतः हङकङका प्रदर्शनकारी र त्यसलाई सघाउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई लक्षित गरेर सीको यो चेतावनी आएको टिप्पणी गरेका छन् । तिब्बत, ताइवान र सिनज्यान पनि यही प्रसंगमा जोडिएको छ ।
सीले दुनियाँलाई चेतावनी दिन नेपालकै मञ्च किन प्रयोग गरे, उनको चेतावनी कसलाई हो ?
‘तिब्बतलाई लिएर यहाँ अलि बढी गतिविधि होला कि भन्ने शंका हो’ : विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बराल
तिब्बतलाई लिएर यहाँ अलि बढी गतिविधि होला कि भन्ने शंका हो उनको । ‘एक चीन नीति’ विरुद्ध कुनै घटना हुन दिन्नौँ भनेर नेपालले भने पनि चीनलाई कता–कता आशंका छ । यो भनाइलाई हङकङ सन्दर्भमा पनि जोड्न सकिन्छ ।
‘सीको भनाइ हङकङको सन्दर्भमा हो, अमेरिकालाई लक्षित हो’ : परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ
आन्दोलनको माग पूरा भइसक्दा पनि हङकङको प्रदर्शन नरोकिएको र त्यसमा अमेरिकी पनि प्रवेश गरेको शंका रहेपछि चीनले चेतावनी दिएको हो । सीले कहीँ न कहीँ बोल्नुपर्ने थियो, नेपालमा बाटो परेका वेला उनी बोलेर गए, यो संयोग मात्र हो ।
‘सीको भनाइलाई मुख्यतः तिब्बत र हङकङसँग जोड्नुपर्छ’ : पूर्वराजदूत सुरेशचन्द्र चालिसे
यो भनाइलाई मुख्यतः तिब्बत र हङकङसँग जोड्नुपर्छ । वेलाबखतमा ‘फ्रि तिब्बत’ समूहले प्रदर्शन गर्छन्, त्यस्ता तत्वलाई हामी सहँदैनौँ भन्ने सन्देश हो यो । अप्रत्यक्ष रूपमा भारतमा पनि प्रो–टिबेटियन मुभमेन्ट भइरहन्छ, त्यसलाई पनि चेतावनी हो ।
‘चीन अहिले जागेको बाघ हो, सबैलाई दबाबमा राख्न खाजेको छ’ : पूर्वराजदूत टंक कार्की
चीन अहिले जागेको बाघका रूपमा प्रस्तुत भयो । त्यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ । उसले अहिले सबैलाई दबाबमा राख्न खोजेको हो ।
० यौन दुर्व्यवहार आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले सभामुख पद मात्र गुमाएनन्, प्रहरी हिरासतमै पुगेका छन्। उनी तत्कालीन माओवादीबाट दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
० कांग्रेसका तर्फबाट रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित मो. अफ्ताब आलम १२ वर्षअघिको घटनामा तानिएका छन्। आइतबार पक्राउ परेका उनी पनि हिरासतमै छन्। पहिलो संविधानसभा चुनावका बेला बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग उनलाई लागेको छ।
० राष्ट्रिय जनता दल (राजपा)का तर्फबाट सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रमोदकुमार साहलाई मंगलबार मात्रै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जनकपुर विमानस्थलमा बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेको आरोप उनमाथि लागेको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार कानुन बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधि एकपछि अर्काे गरी पक्राउ पर्न थालेका छन्। यौन दुर्व्यवहारदेखि व्यक्ति हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा तानिनुले नेताहरूमा नैतिकताको प्रश्न उठ्न थालेको छ।
‘ल मेकर नै ल ब्रेकर भएपछि यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन्’, विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट भन्छन्, ‘आममान्छेले सोच्न पनि नसक्ने घटनामा सांसदको नाम जोडिएर नियमितजसो पक्राउ पर्नुले राजनीतिमा नैतिक आचरणको खडेरी रहेको प्रस्ट हुन्छ।’